Famatsiana :: Ho avy amin’ity herinandro ity ireo fanafody nohafarana • AoRaha
Famatsiana Ho avy amin’ity herinandro ity ireo fanafody nohafarana
Nisedra olana ara-pamatsiana fanafody, indrindra ireo ilaina amin’ny fiarovana sy ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19, ireo farmasia maro teto an-drenivohitra, tamin’ny herinandro iny. Andrasana amin’ity herinandro ity kosa ireo fanafody nohafarana avy any ivelany, izay hampisinda ny fahalanian’ny tahiry eny anivon’ireo toeram-pivarotana samihafa, araka ny nambaran’ny filohan’ny Holafitry ny Farmasia, Andrianasolo Eric, tamin’ny sabotsy lasa teo. Novinavinaina ho ampy hatramin’ny volana oktobra 2020 ireo tahirim-panafody teto amintsika, araka ny filazany, saingy tsy naharaka ny filàna izany ka izao isika voatery nanafatra tany ivelany izao. Avy any Inde sy Eoropa ny ankamaroan’ireo fanafody avy any ivelany ireo. Fantatra fa volampanjakana madiodio no nividianana azy, araka ny fanampimpanazavana.
Isan’ireo nanaovana fanafarana ny fanafody Hydroxychloroquine sy ny Azithromycin ary ireo karazam-panafody fanamafisana ny hery fiarovana, toy ny Vitamine C, ny Mutlivitamines, ny Zocin… izay fototry ny tinadin’ny mpanjifa amin’izao fotoana izao. « Marihina fa efa azon’ny farmasia amidy ireo karazam-panafody mitsabo ny Covid-19 ireo, ankehitriny, saingy tsy maintsy mitondra ny taratasy torolalana avy amin’ny mpitsabo ny mpividy vao mahazo manome fanafody azy ireo ny mpivarotra », hoy indray ny dokotera Andrianasolo Eric.
Fiahiana ny marary
Ireo hopitaly sy toby fitsaboana fototra na CSB, indrindra ny eto amin’ny faritra Analamanga sy any Atsinanana, no laharam-pahamehana hanaparitahana an’ireo fanafody ho tonga eto amintsika, tsy ho ela. Maimaim-poana izany eny anivon’ireo toeram-pitsaboana ireo. Manoloana ny fanararaotana fampiakaram-bidy amin’ny fanafody ataon’ireo mpivarotra sasany dia nilaza ny filohan’ny Holafitry ny Farmasia fa : « vahaolana hisorohana ny fanararaotana ihany koa izao paik’ady natao tamin’ny fanafarana fanafody betsaka avy any ivelany izao, satria sady hahafahana mametra ny sarany mirary ho an’ny vahoaka no hiantohana ny tahiry maharitra ».
Baolina kitra – Iraisam-pirenena :: Handray anjara amin’ny amboaran’ny Arabo ny Barea
Fitsaboana ny covid-19 :: Hitarika ady ny Foloalindahy